စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားအပြည့်အဝနွေ ဦး ရာသီမွေ့ရာထုတ်လုပ်သူ | ရောင်ရာရောဂါ
Rayson စက်မှုဇုန်, ဟားရှားလမ်း, Shishan, Foshan High-Tevice ဇုန်, အဓိကထုတ်ကုန်များအကောင်းဆုံး 10inch အဖြူရောင်မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်အမြှုပ်ပေးသွင်းသူ
ဤထုတ်ကုန်သည်အလွန်အမင်းဘက်တီးရီးယားဆန့်ကျင်ရေးဖြစ်သည်။ အစိုဓာတ်ကိုစိုစွတ်စေသောပစ္စည်းများကိုပါ0င်သည့်၎င်း၏ပစ္စည်းများသည်အမွှေးနံ့သာဖြစ်စေသောပိုးမွှားများ၏ကြီးထွားမှုကိုခြေဖြင့်ထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။
Rayson Global Co. , Ltd သည် 2007 ခုနှစ်တွင် Sosan Town တွင် Fosan High-Tech-Tech-Tech-Tech-Tech-Techers ရှိ 2007 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော 2007 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော Sino-Us ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်အထိ Rayson သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်လက်မှတ်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အသစ်အပါအ0င်ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်း, နှစ်ပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်များကိုတင်ပို့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုသေချာစွာစိတ်ချပါ။ သင့်ရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုနှင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကြိုဆိုပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသော0န်ထမ်းများအနေဖြင့် Rayson သည်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုမြန်ဆန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း, ထုတ်လုပ်ခြင်း, ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ QC ပညာရှင်များသည်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီကိုကြီးကြပ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးပို့မှုသည်အချိန်မီဖြစ်ပြီးဖောက်သည်တိုင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်များကိုဖောက်သည်များထံလုံခြုံမှုနှင့်အသံသို့ပို့သည်ဟုဆိုပါသည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းပိုမိုသိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုပါ။ တည်ထောင်ပြီးကတည်းက rayson သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ထူးချွန်ပြီးအထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်ဖြေရှင်းနည်းများပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ငါတို့ကိုယ်ပိုင် r ကိုထူထောင်ပါပြီ&ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စင်တာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များမျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီခြင်းသို့မဟုတ်ကျော်လွန်ရန်သေချာစေရန်စံသတ်မှတ်ထားသောထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိဖောက်သည်များအတွက်အရောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အသစ်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအကြောင်းပိုမိုသိလိုစိတ်ရှိသောဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
မည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုသင်လက်ခံသနည်း။ LC Sight / TT By, LC, 30% dewivi နှင့် 70% လက်ကျန်ငွေသည်ရေကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများမိတ္တူများအပေါ်ဆန့်ကျင်သည်။ Witinin7အလုပ်လုပ်ရက်များ 1. သင်၏အိပ်ခန်းထဲရှိပုံးတစ်ချောင်းပေါ်ရှိပုံးတစ်ချောင်းပေါ်ရှိမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ တင်. သင်၏အိပ်ရာပေါ်၌ထားပါ။ 2. ခြစ်ရာပလတ်စတစ်ကိုမဖြတ်ရန်နှင့်မွေ့ရာကိုမဖြတ်ရန်သေချာစေရန်တင်းကုပ်ရိုက်အိတ်ကို ဖြတ်. ဓါးဖြင့်ဖြတ်တောက်ပါ။ 3. Vacuum တံဆိပ်ခတ်မွေ့ယာကိုသင်၏အိပ်ရာပေါ်သို့ထုတ်ပါ။ သင်၏မွေ့ရာအသစ်များအပြည့်အဝတိုးချဲ့ရန် 24 နာရီ။ ဟုတ်ကဲ့, ငါတို့စက်ရုံကိုအချိန်မရွေးလည်ပတ်ဖို့ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ Guangzhou Baiyun အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နားမှာရှိနေပြီးကားတစ်စီးနဲ့တစ်နာရီကြာတယ်, မင်းကိုခေါ်ဖို့ကားကိုစီစဉ်ပေးနိုင်တယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအစိုင်အခဲနှင့်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြီးတွင် Rayson သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်သြဇာညောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထဲမှတစ်ခုသို့တိုးပွားလာခဲ့သည်။ အရွယ်အစားအပြည့်အဝနွေ ဦး ပေါက်ရာမွေ့ရာသည်သင်၏ထုတ်ကုန်အသစ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါကအရွယ်အစားအပြည့်နှင့်အခြားသူများနှင့်အခြားသူများကိုအပြည့်အဝစိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ၎င်းတို့တွင်အထည်ချုပ်စျေးကွက်လမ်းကြောင်းသစ်သုတေသန, ဆောက်လုပ်ရေးဒီဇိုင်း, နမူနာ, ပုံစံဖြတ်တောက်ခြင်း,